इन्फोग्राफिक्स: QR कोडहरू स्क्यान योग्य बनाउँदै | Martech Zone
सोमबार, अगस्ट 8, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
मेरा साथीहरूलाई थाहा छ कि म QR (द्रुत प्रतिक्रिया) कोडहरूको फ्यान होइन। मैले क्यूआर कोड देखेको समयसम्म, यो निर्धारण गर्नुहोस् कि म यसलाई स्क्यान गर्न चाहन्छु, मेरो मोबाइल फोन खोल्नुहोस्, कोड स्क्यान गर्न अनुप्रयोग खोल्नुहोस् ... र वास्तवमा यसलाई स्क्यान गर्नुहोस् - म वेब ठेगाना टाइप गर्न सक्दछु। मलाई लाग्छ उनीहरू पनि हुन्। कुरूप ... हो, मैले भने!
यस्तो देखिन्छ कि QR कोड अपनाउने is धेरै चुनौती। सर्वेक्षण गरिएका ती%%% QR कोडसँग परिचित थिएनन्। सर्वेक्षण गरिएको ती २%% लाई आफू के हो भनेर थाहा थिएन! QR कोडहरूको रक्षामा, यो सबै खराब समाचारहरू होइनन्। व्यक्तिले QR कोड प्रयोग गर्दछ जब उनीहरूले छुटको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् र अन्य उद्योगहरूले उनीहरूलाई डाटालाई प्रभावकारी रूपमा पुन: प्राप्त गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्।
मैले देखेका केही उदाहरणहरू मैले विचार गरे कि QR कोडहरूको राम्रो प्रयोगहरू थिए।
एटलान्टामा एक रेस्टुरेन्टमा, मेनूले मेनु अनलाइन मेनूको थप पोषण जानकारी हेर्न पाठकको लागि क्यूआर कोडहरूको प्रयोग गर्‍यो।
एक वेबट्रेंड सम्मेलन मा, प्रत्येक सम्मेलन सत्रमा आगन्तुक ब्याज जानकारी क्याप्चर क्यामेरा सेट अप गरिएको थियो। यसले टीमलाई कुन सत्रहरू सबैभन्दा लोकप्रिय थिए पहिचान गर्न अनुमति दियो।
प्राप्तकर्ताहरूलाई ईमेल मार्फत कुपन पठाउँदै। यद्यपि बारकोडहरूले क्यूआर कोडहरूको साथ साथै कार्य गर्दछ। र बारकोड स्क्यानर रिटेल प्रतिष्ठानहरूमा अधिक प्रचलित छन्।
क्यूआर कोड प्रयोग गर्नका लागि कस्ता उपयोगी कार्यान्वयनहरू तपाईंले देख्नुभयो?
मलाई लाग्छ कि हामी स्क्यान र मान्यता प्रविधिको प्रयोगको कगारमा छौं क्यूआर कोड भन्दा धेरै उन्नत।
स्प्याम र पाठ सन्देश उद्योग
अगस्ट 8, 2011 बेलुका 6:28 बजे
मैले 2010 को डिसेम्बरमा QR कोडहरूको बारेमा ब्लग गरें ( http://kremer.com/qr-codes-link-brick-and-mortar-to-online ) र यहाँ मेरा केही सुझावहरू छन् ...।
इन-स्टोर फेसबुक मनपर्छ: "यहाँ किनमेलको आनन्द लिनुहुन्छ? फेसबुकमा हामीलाई 'लाइक' गर्नुहोस्। यो QR कोड आफ्नो मोबाइल फोनबाट स्क्यान गर्नुहोस्। हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत उत्कृष्ट अफर र छुट प्राप्त गर्ने पहिलो बन्नुहोस्।"
स्टोरमा इ-मेल न्यूजलेटर वा एसएमएस पाठ अलर्टहरूको लागि साइन अप गर्नुहोस्। माथिको जस्तै विचार। साइन अप गर्न को लागी एक पुरस्कार प्रस्ताव गर्न निश्चित हुनुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि QR कोड न्यूजलेटर ल्यान्डिङ पृष्ठ मोबाइल अनुकूल छ।
स्टोर जनसांख्यिकीय वा सर्वेक्षण जानकारीमा: "हामीलाई आफ्नो बारेमा थोरै बताउनुहोस् र नि: शुल्क कुपनहरू पाउनुहोस्"। एउटा छोटो मोबाइल मैत्री सर्वेक्षण पृष्ठ छ जसको अन्तिम पृष्ठ एक इन स्टोर कुपन हो जुन उनीहरूले अहिले प्रयोग गर्न सक्छन्।
छापिएका विज्ञापनहरू, ब्रोशरहरू, व्यापार कार्डहरू: "यस बारे थप जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। यो QR कोड आफ्नो मोबाइल फोनमा स्क्यान गर्नुहोस्।" QR कोडहरू नयाँ छन्, तर धेरै प्रिन्ट गरिएका मिडियाहरूमा महिनौंको लिड टाइम हुन्छ। आफ्नो ग्राहकसँग अहिले र छ महिनाको लागि तिनीहरूको प्रिन्ट योजनाहरू के छन् भन्ने बारे कुरा गर्नुहोस्।
रिटेल संसार भन्दा बाहिर सोच्दै। मैले भर्खरै एउटा ठूलो संग्रहालयमा मार्केटिङ र प्रदर्शनी मानिसहरूसँग कुरा गरें। मैले सुझाव दिएँ कि उनीहरूले निश्चित प्रदर्शन क्षेत्रहरूमा QR कोड राख्न सक्छन्। कोडले प्रदर्शन गरिएको वस्तुमा तिनीहरूको आफ्नै वेब पृष्ठमा लिङ्क गर्न सक्छ, वा सान्दर्भिक बाहिरको वेब स्रोतमा लिङ्क गर्न सक्छ।